दक्षिण एसियामा कोरोना : भारत सबैभन्दा अगाडि, नेपाल कति स्थानमा ?:: Naya Nepal
दक्षिण एसियामा कोरोना : भारत सबैभन्दा अगाडि, नेपाल कति स्थानमा ?
काठमाडौं। विश्वभरी फैलिएको कोरोना महामा’रीको पछिल्लो इपिसेन्टर दक्षिण एसीयाली मुलुक बनिरहेको छ। भुटान बाहेक अधिकांश मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । हालसम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५९ लाख ९६ हजार ८ सय पुगेको छ भने ९४ हजार ५ सय ५९ जनाको कोरोनाकै कारण मृ’त्यु भइसकेको छ।
दक्षिण एसियामा अन्य देशको तुलनामा भुटान कम प्रभावित देखिएको छ । हालसम्म भुटानमा २ सय ७१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोनाका कारण भुटानमा कसैको निधन भएको छैन।
बंगलादेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख ५७ हजार ८ सय ७३ पुगेको छ । ५ हजार १ सय २९ जनाको निधन भएको छ । यस्तै पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३ लाख १० हजार २ सय ७५ पुगेको छ भने ६ हजार ५ सय ५७ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्।
यस्तै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसबाट ७३ हजार ३ सय ९४ जना संक्रमित भएका छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म ४ सय ७७ जनाको संक्रमणका कारण निधन भएको छ ।
यसैगरी अफगानिस्तानमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३९ हजार २ सय २७ पुगको छ भने १ हजार ४ सय ५३ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्।
यस्तै माल्दिभ्समा अहिलेसम्म १० हजार ४५ जनामा कोरोना देखिँदा ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । श्रीलंकामा ३ हजार ३ सय ४९ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने १३ जनाले ज्या’न गुमाएका छन्।
१७१ वर्ष पहिले जंगबहादुरले विश्वकै चौथी महँगी महिलासंग बिताएका त्यो रात, कति पाउण्ड तिरेका थिए ?
काठमाडौं। एक सय ६८ वर्ष पहिले बिस १९०६ साल माघमा (सन् १८५०) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा ठुलो टोलीसहित बेलायत प्रस्थान गरेका थिए । विश्व साम्राज्य बेलायतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न राजा सुरेन्द्रको विशेषदूत बनेर उनी बेलायत पुगेका थिए । जंगबहादुर झण्डै ३ महिना बेलायत बसे ।
जंगबहादुरको बेलायत बसाईको रोचक प्रसंग नेपाली जनजीवनमा किंबदन्तीका रुपमा जीवित छन् । त्यही भ्रमणमा रहदा जंगबहादुरले त्यो बेलाकी एक वेश्यावृत्ति गर्ने लाउरा बेलसंग एक रात बिताएको त्यो घटना विश्वकै चर्चित घटनाको रुपमा दर्ता भएको छ । यहाँहरूलाई रोचक लाग्नसक्छ — SIX OF THE MOST EXPENSIVE WOMEN IN HISTORY को चौथो नम्बरमा राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पनि नाम आएको छ । उनले ई.स, १८५० मा एक महिलाका लागि २ लाख ५० हजार पाउण्ड तिरेका रहेछन् ।
लाउरा बेल सन् १८२९ देखि १८९४ सम्म बाँचेकी बेलायतकी एक सुन्दरी हुन् । यिनी शुरुमा डब्लिनका घरानियाहरुको लागि वे,श्यावृत्ति गर्ने गर्दथिन् । पछि लन्डनमा गई हाइड पार्क वरिपरि दुईवटा सेता घोडाले तान्ने बग्गी चलाउन थालिन् र धनाढ्यहरुलाई मनोरञ्जन दिन थालिन् । जब उनी २१ वर्षकी थिइन् तब नेपालका राणा प्रधानमन्त्री बेलायत भ्रमणमा आउँदा उनीसँग प्रेममा फसे । भनिन्छ जम्मा १९ दिनको लन्डन र तीन महिनाको बेलायत बसाईमा उनका लागि मात्र जंग बहादुरले २ लाख ५० हजार पाउण्ड खर्च गरे ।
एक्काइस वर्षकी लाउरा जगमगाउँदी सुन्दरी थिइन् । उनी बाठी उस्तै र बुद्धि पनि बढ्तै थियो । त्यही कारण उच्च घरानासँग सम्पर्क कस्न माहिर यौनकर्मी बनिन् । आकर्षक पोसाकमा सेतो घोडा चढेर लन्डनको हाइड–पार्कमा धनी घरानियाँ पात्रको खोजमा निस्किन्थिइन् उनी । त्यही क्रममा जंगबहादुर राणाको आँखामा लाउरा गढ्न पुगिन् । जंगबहादुर बेलायत बासमा रहँदा उनी नब्बे दिनसम्म घनिष्ठ रहिन् । जंगबहादुरलाई बेलायतबाट बिदा गर्दाका बखत उपस्थित ठूला–बडा बेलायतीहरूको लहरमा लाउरा पनि सामेल थिइन् । फर्कने क्रममा औंठी उपहार दिंदै जंगबहादुरले भनेका थिए, ‘कुनै दु:ख परे मलाई सम्झिनू ।’
लाउराप्रति जंगबहादुर यति आकर्षित भएका थिए कि उनले श्री ३ महाराज र प्रधानमन्त्री पदसमेत ‘स्थगन’ राखी लन्डनको ‘राजदूत’ मा सीमित हुन चाहेका थिए । राणा घरानाकै इतिहासकार पुरुषोत्तमशमशेर राणाका अनुसार, ‘लन्डन पुगेका नोकर–चाकरहरूमध्ये केही मात्र साथमा राखी अरू सम्पूर्ण भाइलगायत प्रतिनिधिमण्डललाई काठमाण्डू फर्किनू भनी एक वर्षका निम्ति नेपाल सरकारको राजदूतको हैसियतले लन्डनमै बस्ने इच्छा प्रकट गरे । तर सँगै गएकाहरूले लन्डनमा राज गरिबक्सनु मनासिब हुँदैन, नयाँ सिर्जना गरिबक्सेको राजकाजसम्बन्धी क्रियाकलाप सबै सम्हाल्न हजुरबाहेक हामी कसैको पनि आँट आउँदैन, तसर्थ यो पद्धति नै तहस–नहस हुन्छ भन्ने जोडबलमा जंगबहादुर फर्केका हुन् ।’